आहा! सन्दकपुरको सौन्दर्य [१५ तस्बिरसहित]
रमेश सायन बुधबार, चैत २६, २०७६, १७:३९
सन्दकपुर, अर्थात् जहाँ पुगेपछि थकाई आफैं थाक्छ। तन र मनमा फुर्ति चढ्छ। फोटोजेनिक मानिस हाँस्दा देखिने मिलेका दन्तलहरजस्ता हिमालका लहरले मन कुत्कुत्याउँछ।
३ हजार ६ सय ३६ मिटर उचाइमा मुस्कुराइरहेको सन्दकपुर नेपाल-भारत सिमानामा पर्छ। पूर्वी इलामको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ। हिउँदे सन्दकपुर स्निग्ध‚ सेतो र शान्त देखिन्छ। नेपाल, भारत र भुटानका गरी ६० बढी हिमाल नांगा आँखाले देख्दा, कुन मानिसको मन आनन्दित नहोला? कुन मानिसका आँखा हर्सले नभिज्लान्! कुन मानिसको हृदय रमाउँदैन होला!
नेपालबाट भर्खरै पुगेको आलो मोटरबाटो छ। भर्खरै पुगेको ताजा बिजुलीको उज्यालो छ। प्राचीनकालको तपोभूमि‚ जसको धार्मिक महत्व उच्च छ। हिन्दुहरुका लागि पवित्र माइखोलाको शिर हो। यसकारण यो भूमी पवित्रताको शिर पनि हो।
भारतको सिंहलिला नेश्नल पार्क पनि यही सिमानामा पर्छ। भारतीयहरुका लागि प्रख्यात ट्रेकिग रुट हो। तर नेपालीहरुको लागि अझै नौलो जग्गा हो। हिँउदे पूर्णिमाको मेसो पारेर पुग्ने हो भने अझै यहाँको सौन्दर्य खुल्छ। बिहान हिमालको शिर टेक्दै गरेको जुन र घाम एकैपल्ट देख्न सकिन्छ। यो दृष्य यति भव्य देखिन्छ कि संसारभरका कविहरु भेला पार्दा पनि शब्दमा उतार्न मुस्किल पर्ला।
आमाको गर्भबाट जन्मदै गरेको नवजात शिशुजस्तो यो ब्रह्माण्डको गर्भबाट सूर्य जन्मन्छ। यो दृष्य यति रोमाञ्चक हुन्छ कि भेला भएका मानिस एकैसाथ चिच्याउँदै खुसी व्यक्त गर्छन्। सुनको जलप हालेको हिमालको शिरमा घामले पहिलो पाइला राख्छ। घामका ती कलिला पैतला हिँड्न थाल्छन्। विस्तारै पहाडतिर झर्छन्। घामका पैतला पहाडका खोँचमा खसेर नदुखुन् भनेर नरम कपासको भुवाजस्तो कुहिरो पहाडका खोंचमा बिछिन्छ।
सन्दकपुरमा दुई नेपाली होटल छन्। बाँकी सबै भारतीय। ठाउँ खर्चिलो छ। इलाम, माइपोखरी, माइमजुवा,कालपोखरी हुँदै पुग्न सकिन्छ। बसन्त ऋतुमा चाँप र गुराँसले पहाड रंगिन बन्छ।
'अतिथि देवो भवः' ले ताजा सास फेरिरहेको छ। हामी सहर वा सहरका छेउछाउ बस्ने मानिसलाई, त्यहाँका मानिसले गर्ने सत्कारले हुरुक्कै पार्छ। चौरीको घ्यू र छुर्पी कोसेली हुन्छ।
भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईंका आँखा साँच्चै भाग्यमानी छन् भने निंगालोघारीमा खेलिरहेका रेड पान्डा देख्न सकिन्छ। यसले यात्रा थप रोमाञ्चक बनाउँछ।
उचाइमा पुग्दा सास त बढ्छ तर त्यो श्वासको गति ध्यानले समातेको मानिसको जस्तो लयात्मक हुन्छ। आनन्द र उचाइको सुखले बुढो मनिस पनि सानो बालकजस्तो पुलकित हुन्छ।
तपाईंसँग उचाइको सौन्दर्यतामा रमाउने लत छ भने एकबाजी सन्दकपुर पुग्नुस्। सिफारिस भो। अब केही तस्बिर हेरौं।
सबै तस्बिर : रमेश सायन